Sinovac ကာကွယ်ဆေးက ဥရုဂွေးနိုင်ငံ၌ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် COVID-19 ဖြင့်သေဆုံးမှုကို ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချနိုင်ခဲ့ - Xinhua News Agency
ဥရုဂွေးနိုင်ငံ၊ မွန်တီဗစ်ဒီအို မြို့၌ အမျိုးသမီးတစ်ဦး တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုခံယူနေသဉ်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ် ၁ ရက်ကတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မွန်တီဗစ်ဒီအို၊ ဇွန် ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဥရုဂွေးနိုင်ငံ၌ အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၆၉ နှစ် အရွယ် Sinovac ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသူများတွင် COVID-19 ဖြင့်သေဆုံးမှုနှုန်း ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထိ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကာကွယ်ဆေးထိရောက်မှုဆိုင်ရာ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့် Sinovac ကုမ္ပဏီ မှ ထုတ်လုပ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအကြိမ် ထိုးနှံမှုခံယူပြီး ၂ ပတ်အကြာအတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသူများအနက် အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၄၉ နှစ်အတွင်း သေဆုံးမှုနှုန်းသည် ၉၅.၃ ရာခိုင်နှုန်းထိ ကျဆင်းခဲ့ပြီး၊ အသက် ၅၀မှ ၆၉ နှစ်အတွင်း သေနှုန်းသည် ၉၅.၂ ရာခိုင်နှုန်းထိ ကျဆင်းသွားကြောင်း ဇွန် ၈ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် CoronaVac ကာကွယ်ဆေးအသုံးပြုထားသူများအနေဖြင့် အရေးပေါ်ကုသမှုဌာနများ၌ ကုသမှုခံယူရသူ အသက် ၄၉ နှစ်အောက် အရွယ် လူနာ ၉၄.၄ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျခဲ့ပြီး၊ အသက် ၅၀မှ ၆၉နှစ်ကြား အရွယ် လူနာ ၉၂.၂ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကာကွယ်ဆေးအား ဒုတိယအကြိမ်ထိုးနှံမှုခံယူပြီး ၁၄ ရက်အကြာတွင် အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၄၉ နှစ်ကြား အရွယ် COVID-19 ကူးစက်ခံရမှု ၆၄.၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ပြီး၊ အသက် ၅၀ မှ ၆၉ နှစ်ကြား အရွယ် ကူးစက်ခံရမှု ၆၁.၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ဝန်ကြီးဌာန၏ လေ့လာမှုအရ SARS-CoV-2 အတွက် ကာကွယ်ဆေး ထိရောက်မှုနှင့် လုံခြုံမှုကို ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့တစ်ခုမှ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုအချိန်အထိ ဥရုဂွေးနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ်စလုံးထိုးနှံမှု ခံယူထားကြပြီး ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ Sinovac ၊ Pfizer နှင့် AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ပထမအကြိမ်ထိုးနှံမှုခံယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွင် COVID-19 အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၃၂၂,၉၇၈ ဦးရှိပြီး စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ ၄,၇၄၉ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
MONTEVIDEO, June9(Xinhua) — The COVID-19 mortality rate among Uruguayans aged 18 to 69 who were vaccinated with Sinovac vaccine fell by more than 95 percent, according to the latest Vaccine Effectiveness report from the Public Health Ministry.
Two weeks after receiving the second dose of the CoronaVac vaccine, developed by Chinese drugmaker Sinovac, mortality fell by 95.3 percent among the vaccinated population aged 18 to 49, and by 95.2 percent among those aged 50 to 69, showed the report released Tuesday.
So far, some 30 percent of the Uruguayan population has received both doses ofacoronavirus vaccine and 56 percent has received the first dose of vaccines from Sinovac, Pfizer and AstraZeneca.
Uruguay has registeredatotal of 4,749 deaths from the coronavirus and 322,978 confirmed cases of infection. Enditem
Photo-A woman receivesajab of China’s Sinovac COVID-19 vaccine in Montevideo, Uruguay, March 1, 2021.(Photo by Nicolas Celaya/Xinhua)